चर्चित यी ९ कलाकारहरुले किन हाल्दैनन् भोट ? यस्तो छ भित्रि कारण, पढ्नुहोस « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
चर्चित यी ९ कलाकारहरुले किन हाल्दैनन् भोट ? यस्तो छ भित्रि कारण, पढ्नुहोस
२१ मंसिर २०७४, बिहीबार २२:३३ मा प्रकाशित
मङ्सिर २1, काठमाडौँ । देशको ४५ जिल्लामा भोलि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ ।
देशमा पहिलो पटक हुन लागेको यो ऐतिहासिक निर्वाचनका लागि रानीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कलाकर्मीदेखि सर्वसाधारण समेत उत्साहित देखिएका छन् । निर्वाचनबाट आफ्ना नजिकको दल, दलका नेता चुन्न सबै उत्साहित देखिएका हुन् ।
यो निर्वाचनका लागि कोही कलाकार केही दिनको यात्राबाट आफ्नो जिल्ला पुगिसकेका छन् भने केही कलाकाकर्मीले राजधानीबाटै भोट हाल्ने ब्यवस्था पनि मिलाएका छन् ।
यहि भीडका त्यस्ता केही कलाकार पनि देखिएका छन् । जसले यो निर्वाचनमा भोट नखसाल्ने भएका छन् । जान्नुहोस्, को को कलाकारले खसाल्दैनन् भोट ।
अभिनेता राजेश हमालले भोलिको निर्वाचनमा भोट हाल्ने छैनन् । एक कार्यक्रमको सिलसिलमा केही दिन पहिले भारतको सिमला पुगेका राजेश चुनावपछि मात्र फर्किने उनका सहयोगीले बताए ।
राजेशले यस अगाडि काठमाडौ क्षेत्र नं ६ को लैनचौर स्थित बुथबाट भोट खसाल्दै आएका थिए । यस अगाडि सधै भोट खसाल्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई पनि चुनावमा भाग लिएर आफ्नो मतको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्ने राजेश आफैले भने यो चुनाव मिस गरेका हुन् ।
अभिनेत्री दीपाले पनि भोलि भोट नहाल्ने भएकी छन् । चलचित्रको सुटिङ लगायतको कारणले उनी काठमाडौ नै रहनु पर्ने भएकोले उनले भोट खसाल्न नपाउने भएकी हुन् ।
बिराटनगर क्षेत्र नम्बर २ बाट भोट खसाल्दै आएकी दीपाले बुबा लगायत आफन्तलाई भने भोट खसाल्नकै लागि केही दिन पहिले जिल्ला पठाएको बताइन् ।
पछिल्लो समयका स्टार अभिनेता प्रदीप खड्काले पनि यो निर्वाचमा भोट खसाल्ने छैनन् । चलचित्र ‘लिलिबिली’ छायाँकनको सिलसिलामा बेलायतमा रहेका कारण उनले भोट खसाल्न नपाएका हुन् । स्वदेशमै भएका भए उनले बानेश्वरबाट भोट खसाल्थे । -कुवेर गिरी/रातोपाटीबाट साभार